Faahfaahin ka soo baxaya dil caawa ka dhacay Gaalkacyo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faahfaahin ka soo baxaya dil caawa ka dhacay Gaalkacyo
Faahfaahin ka soo baxaya dil caawa ka dhacay Gaalkacyo
Wararka aan ka heleyno Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug dhinaca Puntland ayaa waxaa ay sheegayaan in Caawa halkaas lagu dilay Nin la sheegay inuu kamid ahaa dadka deegaanka Magaaladaas.
Goobjoogayaal la hadlay Najahonline.net ayaa u xaqiijiyay in wiil dhalinyaro ah oo ku hubeysnaa Bastoolad uu toogtay Ninkaas xili uu ku sugnaa gudaha Masaajidka Abuu Hureyra ee Gaalkacyo, waxaana xiligaas laga baxay salaadii maqrib.
Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Siciid Jaamac Kulan (Siciid Manadona), waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa Nin taksiile caan ah oo ka dhex-shaqeyn jiray Magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo.
Ninkii hubeysnaa ee dilay Siciid Manadona ayaa si deg deg ah goobta uga baxsaday, isla markaana waxaa daqiiqado kadib Masaajida uu falka ka dhex dhacay tegay Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Maamulka Puntland.
Ciidamada Booliska ayaa Caawa lasoo sheegayaa in howlgalo kala duwan ay ka wadaan xaafado dhowr ah oo ka tirsan Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, iyagoona raadinaya ninkii falka dilka ahaa geystay.
Xaalada magaalada Galkacyo ayaa caawa ah mid kacsan kadib markii uu dalkaasi uu kadhacay.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa la dhacay falal aman darrow ah.
Maqaal horeKulan looga hadlayay dib u eegista hindise Sharciyeedka dhulalka oo maanta lagu qabtay Baydhabo.
Maqaal XigaRW Rooble Oo La Kulmay Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed